Musa ukunxiba 'imaski engalunganga' kuloliwe we-Eurostar!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Musa ukunxiba 'imaski engalunganga' kuloliwe we-Eurostar!
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amapolisa aseFrance asusa umkhweli ongalawulekiyo wase-Bhritane onxibe 'uhlobo olungalunganga lwemaski' kuloliwe wase-Eurostar, ambambe, emva kokumisa okungxamisekileyo eLille.
Uloliwe we-Eurostar unyanzelwe ukuba amise ngokungxamisekileyo eLille, eFrance ngaphezulu komkhweli ongathobeliyo.
Umkhweli kaloliwe waseBritane ususwe kuloliwe, wabanjwa emva kokudibana nomphathi woololiwe wase-Eurostar.
Umgibeli waba ndlongondlongo kwaye woyikisela kwicala elikwibhodi, ke kwabizwa amapolisa.
Amagosa asebupoliseni axhobileyo asusa ngenkani umkhweli owayetyholwa ngokunxiba 'uhlobo olungelulo lwemaski' kuloliwe wase-Eurostar emva kokumisa okungxamisekileyo eLille, eFrance ngoLwesine ebusuku.
The Uloliwe we-Eurostar wayehamba esuka eParis Gare du Nord esiya eSt.Pancras ngolwe-XNUMX emva kwemini kodwa kwanyanzeleka ukuba ayeke ngokungxamisekileyo eLille emva kokuba umphathi kaloliwe ethe waxambulisana nomhambi wase-Bhritane Liverpool ngaphezulu kobuso bakhe, ngokutsho kwabahambi abakhwele kuloliwe.
Emva kwempikiswano, umphathi wathi bazokwazisa amapolisa aseLille ngokusilela kwakhe ukulandela imigaqo ye-COVID-19, ngololiwe esenza imeko engxamisekileyo, engamiselwanga kwisikhululo apho amagosa asibhozo anyanzelisa ukumsusa ngenkani umkhweli.
Njengoko wayeshiya uloliwe, iBritane, ekucingelwa ukuba ikwiminyaka yama-40, wathi utyholwa "ngokunganxibi uhlobo olufanelekileyo lwesigqubuthelo sobuso" kwaye ngoku "uzakushiyeka yedwa eFrance," eyibiza ngokuba "impatho ekhohlakeleyo."
Isithethi se Eurostar Ukhusele impendulo kule meko, esithi "umgibeli waba ndlongondlongo kwaye woyikisa iqela elikwibhodi" emva kokuba bemkhumbuze ngomthetho wabo wokunxiba imaski kwaye, ngenxa yoko, "wacelwa ukuba ashiye uloliwe kwisikhululo saseLille . ” Ngokuhambelana "nenkqubo yesiqhelo" yenkampani amagosa asebupoliseni abizelwa "ukuzimasa nokuncedisa."
Amapolisa aseFrance aqinisekisile ukuba le ndoda ibanjiwe malunga nesi sigameko kuloliwe kodwa khange iphinde ibonelele ngokuqhubekayo ngale meko.
I-Eurostar ithi kwiwebhusayithi yayo ukuba bonke abakhweli mabanxibe isigqubuthelo ebusweni koololiwe, nokuba bagonyiwe ngokupheleleyo, kunye nabo basilelayo ukuthobela uhambo olunokwaliwa. Izikhokelo zenkampani azichazi ukuba loluphi uhlobo lwemaski olufunekayo, kuphela ukuba kufuneka ligqume umlomo kunye neempumlo zabakhweli.